တောမတ်စ် အကွိုင်းနပ်စ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(သောမတ်စ် အကွီနာ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
An altarpiece in en:Ascoli Piceno, Italy,
by en:Carlo Crivelli (15th century)
en:Doctor of the Church
en:Roccasecca, en:Kingdom of Sicily
မတ် ၇ ၁၂၇၄ (အသက် ၄၈–၄၉)
Fossanova, en:Papal States
၁၃၂၃ ဇူလိုင် ၁၈, en:Avignon, en:Papal States by en:Pope John XXII
en:Church of the Jacobins, Toulouse, France
The Summa theologiae,amodel church, the sun on the chest ofaDominican en:friar
Academics; against storms; against lightning; apologists; Aquino, Italy; en:Belcastro, Italy; book sellers; Catholic academies, schools, and universities; chastity; Falena, Italy; learning; pencil makers; philosophers; publishers; scholars; students; en:University of Santo Tomas; Sto. Tomas, Batangas; en:Mangaldan, Pangasinan; theologians
Doctor Angelicus (the Angelic Doctor)
en:Summa contra Gentiles
en:Correspondence theory of truth
အရစ္စတိုတယ် ဘာသာရေးယုံကြည်မှု (en:Aristotelian theology)
en:Principle of double effect
en:Homo unius libri
en:Thomistic sacramental theology
en:Anselm of Canterbury
Virtually all of subsequent en:Western philosophy and en:Catholic theology, as well asasignificant amount of en:Protestant theology
တောမတ်စ် အကွိုင်းနပ်စ် (သို့) သောမတ်စ် အကွိုင်းနပ်စ်[မှတ်စု ၁](အင်္ဂလိပ်: Thomas Aquinas, /əˈkwaɪnəs/; အီတလီ: Tommaso d'Aquino, lit. 'Thomas of Aquino', တိုမတ်ဇို ဒဲကွီနို; ၁၂၂၅ – ၁၂၇၄ မတ် ၇) သည် အီတလီ ဒိုမီနီကန်ဂိုဏ်းဝင် ရဟန်း၊ ဒဿနဆရာ၊ ကတ်သလစ် ဘုန်းတော်ကြီး၊ သူတော်စင်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ အလွန်ဩဇာညောင်းသော ဒဿနဆရာ၊ ခရစ်ယာန်ဝါဒအခြေပြုဒဿန အယူအဆများ၌ တရားရေး၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆုံးအဖြတ်ပေးသူ အကွိုင်းနပ်စ်ကို နှောင်းပိုင်းတွင် Doctor Angelicus ၊the Doctor Communis ၊ the Doctor Universalis စသည့်အမည်များဖြင့်လည်း သိရှိကြသည်။ အကွိုင်းနပ်စ် ဆိုသည့်အမည်သည် ယနေ့ခေတ် လာဇီယို (လာ့တ်စ်ယို) ၊ အကွီနိုကောင်တီ၏ ဇစ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်း ပြသလျှက်ရှိသည်။ သဘာဝကျကျ ဘာသာတရားဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှု (natural theology) ကို ထောက်ခံအားပေးသူ၊ တိုမစ်ဇင် (Thomism) ဟုအမည်ရသော ဘာသာရေးဒဿနဂိုဏ်းကို တည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သဘာဝကျသော ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ အသိဉာဏ်အလင်းတို့၏ ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်ဟု ခိုင်မာစွာ ဆိုခဲ့သည်။ အနောက်ကမ္ဘာ၏ တွေးခေါ်ယူဆပုံအပေါ်တွင် အတော်လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိ၏ ။ ခေတ်သစ် ဒဿနများစွာတို့သည် ၎င်း၏ စိတ်ကူးအယူအဆအပေါ် တိုးတက်ချဲ့ထွင်မှုရှိသကဲ့သို့ ဆန့်ကျင်ချေဖျက်မှုများလည်းရှိကြရာ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ကျင့်တရာပိုင်း၊ သဘာဝ ဥပဒေသ၊ ရုပ်လွန်ပညာ၊ နိုင်ငံရေးသီအိုရီ စသည့် ကဏ္ဍများ၌ ဖြစ်သည်။
ထိုခေတ်ထိုအခါက ကတ်သလစ်သာသနာ၏ ယုံကြည်လက်ခံမှုများစွာနှင့်မတူဘဲ တောမတ်သည် အရစ္စတိုတယ် အဆိုပြုခဲ့သော စိတ်ကူးအချို့ကို လက်ခံဆုပ်ကိုင်ခဲ့ကာ ခရစ်ယာန် အခြေခံသဘောတရားများနှင့် အရစ္စတိုတယ် ဒဿနကို ပေါင်းစပ်ရန် အားထုတ်ခဲ့သေးသည်။
အထင်ရှားဆုံးလက်ရာများမှာ Disputed Questions on Truth (၁၂၅၆-၁၂၅၉) ၊ Summa contra Gentiles (၁၂၅၉-၁၂၆၅) ၊ အဆုံးမသတ်ခဲ့သော Summa Theologica (သို့) Summa Theologiae (၁၂၆၅-၁၂၇၄) တို့ဖြစ်ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာများ၊ အရစ္စတိုတယ်(ဝါဒ)အပေါ် ရှင်းလင်းချက်မှတ်စုများသည် ၎င်း၏ အထင်ကရ လက်ရာများထဲက အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တောမတ်စ်သည် ခရစ်တော်၏ နောက်ဆုံးညစာနှင့်ပတ်သက်သော ဓမ္မတေးများကြောင့်လည်း အထူးထင်ရှားခဲ့ပြန်သည်။ ထိုဓမ္မတေးများသည်ကား ခရစ်ယာန် ဝတ်ပြုဆုတောင်းမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်လာခဲ့လေသည်။ ကတ်သလစ်ဂိုဏ်းက တောမတ်စ်ကို သူတော်စင် (saint) အဖြစ် ဂုဏ်ပြုခဲ့၍ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ရဟန်းစာများကို လေ့လာသင်အံသူများအတွက် စံပြဆရာတစ်ပါး၊ သဘာဝကျသည့် ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် ယုတ္တိကျသော ယုံကြည်မှုနယ်ပယ်တို့၏ အမြင့်မားဆုံးဖော်ပြခြင်းခံရသူအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ကြသည်။ ခေတ်ပေါ်ကာလများတွင် ပုပ်ရဟန်းမင်း၏ အမိန့်အာဏာ လမ်းညွှန်မှုများအောက်၌ ၎င်း၏ စာပေများသည် ရဟန်း (priests) ၊ ရဟန်းငယ် (deacons) အဖြစ် သာသနာ့ဘောင်သွတ်သွင်း ခံယူလိုသူများအတွက် မဖြစ်မနေလေ့လာရသော အစီအစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ကာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံစံအတွင်းမှသူများသာမက (ဝိနည်း၊ ဝတ်ပြုမှုပုံစံ၊ ကတ်သလစ်ဂိုဏ်း၏ သမိုင်း၊ ကတ်သလစ်ယုံကြည်မှု၊ ဒဿန) စသော ဘာသာရပ်များကို လေ့လာလိုသူများအဖို့လည်း လေ့လာရန်လိုအပ်သော စာပေများဖြစ်လေသည်။
တောမတ်စ် အကွိုင်းနပ်စ်ကို ကက်သလစ်သာသနာ၏ အကြီးကျယ်ဆုံး ဘာသာရေးပညာရှင်၊ ဒဿနပညာရှင်များထဲက တစ်ဦးအဖြစ်ယူဆကြသည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်း ဘဲနစ်ဒစ်ခ် (၁၅) က "ကတ်သလစ်ဂိုဏ်းက တောမတ်စ်၏ အဆုံးအမများကို ဒိုမီနီကန်ဂိုဏ်း၏ မူပိုင်အဖြစ် ကြေညာလိုက်တဲ့အခါ ဒီဂိုဏ်း ... ဂုဏ်သစ်သွေးသစ်တို့ကို ရယူနိုင်ခဲ့ပေတယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းအဆက်ဆက် အထူးချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရတာ ဒီသူတော်စင်ပါ၊ ကတ်သလစ်ဂိုဏ်များစွာတို့ရဲ့ ဆရာသခင်၊ သူတော်စင်ပါပဲ။" ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ် ဒဿနပညာရှင် အန်ထနီ ကန်နီကလည်း တောမတ်စ်သည် အနောက်ကမ္ဘာဖက်က အကြီးကျယ်ဆုံး ဒဿနဆရာတစ်ဒါဇင်ထဲက တစ်ဦးဟု ယူဆသည်။
↑ အသံထွက်မှာ တော/ထောမတ်စ် အကွိုင်းနပ်စ် ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာစကားဖြင့် သောမတ်စ် ဟူ၍ ဖလှယ်ရေးသားမှုများသည်။
↑ Holy Men and Holy Women။
↑ Notable Lutheran Saints။
↑ Saint Thomas Aquinas (2008-12-12)။
↑ David၊ Marian (5 February 2016)။ Zalta၊ Edward N. (ed.)။ The Stanford Encyclopedia of Philosophy။ Metaphysics Research Lab, Stanford University – via Stanford Encyclopedia of Philosophy။ [လင့်ခ်သေ]
↑ Brown 2014, p. 12.
↑ Massey 1995, p. 16.
↑ Avicenna (Ibn Sina) (c. 980–1037)။ The Internet Encyclopedia of Philosophy (2006-01-06)။
↑ "Anselm of Canterbury (1033–1109)"၊ Internet Encyclopedia of Philosophy၊ 2006၊ 10 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ Thomas Aquinas – Internet Encyclopedia of Philosophy
↑ Conway 1911.
↑ Vaughan 1871.
↑ McInerny၊ Ralph; O'Callaghan၊ John (5 February 2018)။ Zalta၊ Edward N. (ed.)။ The Stanford Encyclopedia of Philosophy။ Metaphysics Research Lab, Stanford University – via Stanford Encyclopedia of Philosophy။
↑ Blair၊ Peter။ Reason and Faith: The Thought of Thomas Aquinas။ 13 September 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ St. Thomas Aquinas | Biography, Philosophy, & Facts။
↑ Code of Canon Law, Can. 252, §3 Code of Canon Law။
↑ Aquinas၊ Thomas (1993)။ Selected Philosophical Writings။ Oxford University Press။ pp. Xi။ ISBN 0-19-283585-8။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောမတ်စ်_အကွိုင်းနပ်စ်&oldid=686175" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၃:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။